Leadership qualities do not just appear withanew name tag
Career Advice Management Upgrade Yourself Workplace Success
ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းသည် နာမည်အသစ်တွင်တိုင်း ထွက်လာခြင်းမဟုတ်
ကျွန်တော် အားကစားကို ချစ်မြတ်နိုးပါသည်။ ၄င်းအားကစားသည် ကျွန်ုပ်အား တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အသင်းအဖွဲ့နှင့် အနိုင်ရရှိခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုတွေ သိရှိနားလည် စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆိုးရွားတဲ့နေ့ရက်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားကို ကိုယ်ချင်းစာတက်အောင် နှင့် အားကစားသမားများမှ အကောင်းဆုံးသော ကစားသမား ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဘယ်လိုဆွဲခေါ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်အားသင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Mike Bradley's The Art of Captaincy (Mike Bradley၏ အနုပညာစွမ်းဆောင်ရည်) ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ခြင်း အားဖြင့် သူက ခရစ်ကတ် ကစားတာကို ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ ခရစ်ကတ်ကစားဖို့ဆိုရင် လူ(၁၁)ယောက်ထဲက (၄)ယောက်ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက ကူညီဖို့ ကျွမ်းကျင်မှု လုံလောက်စွာရှိရမည်။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှု လုပ်ဆောင်မှုတွေသည် အကောင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အခြား(၃)ယောက်က အတော်ဆုံးဖြစ်နေရပြီး ကျန်(၇)ယောက်လည်း ကူညီဖို့ အသင့်ဖြစ်နေရမည်။ ခေါင်းဆောင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်/ ဦးဆောင်ချက်မကောင်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြား(၄)ယောက် သည် အကောင်းဆုံး / အတော်ဆုံးဖြစ်နေရပြီး ကျန်သူတွေကူညီဖို့လိုအပ်သည်။ လိုရင်းကိုပြောရမည် ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာလည်း ပြဿနာရဲ့အဖြေရှိချင်မှရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်သည် အခန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သူသည် တခြားတွေထဲက ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကို ရွေးထုတ်နိုင်သင့်ပါသည်။ အခြားရောဘာရှိသေးလဲ။
ဥပမာ သင်ကတစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့သားအားလုံးနှင့်အိမ်စာတွေကို လုပ်နေရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်စိတ်မစား၊ ဝါသနာမပါတဲ့ အဖွဲအစည်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်တွေက ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လဲ။ သူတို့က ဘာရလဒ်တွေသူတို့ရလိမ့်မလဲ။ သင့်ရဲ့အမူအရာ တွေကိုဘယ်လို ပြန်တုံ့ပြန်မယ်လို့ထင်လဲ။ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ။ အဖွဲ့သားတွေထဲမှာရော ဘာအရင်းအမြစ်တွေရှိသေးလဲ။
ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် အဖွဲ့သားတွေ အိမ်ကွင်းကစားခြင်းမှာအသာစီးမှုတွေရှိလဲ။ သူတို့ကွင်းကို ကောင်းကောင်းသိပြီး သူတို့ကို အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်များလဲ သူတို့ဆီမှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားနေရာကို သွားကစားရတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကကော် ခရီးရှည်သွားနေရပြီး ပင်ပန်းသော်လည်းသူတပါးတွေရဲ့နေရာ ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ အနေနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကိုပါလေ့လာရသည်။ အကယ်၍ သင့်အဖွဲ့သားတွေအိမ်မှာ အင်တာနက်လှိုင်းမရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် အလုပ်သွားဖို့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘတ်(စ်)ကားပေါ် မှာ မီးပွိုင့်ကြောင့် (၂)နာရီလောက်အကြာ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရမယ်ဆိုလျှင် သင့်ရဲ့အဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ထဲတွင် တွေ့ဖို့ရန် တကယ်လိုပါသေးသလာ။ အဖွဲ့သားတွေရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံဖို့လိုသေး လား။ တကယ်လို့သင်ကသင့်အဖွဲ့သားတွေကို ရုံးခန်းထဲမှ မိုဒမ်းကရိယာအဟောင်းကို ပေးသုံးခဲ့လျှင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်မလဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးက သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ်အခြေခံပြီး သင့်ရဲ့အမှုအရာကို အဆိုး၊ အကောင်း ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အားကစားသမားတွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင့်ဆီမှာ အဖြေမရှိဘူးဆိုရင် ဝန်ခံလိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ။ အဖွဲ့ထဲမှာ စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတဲ့အရာကို ပိုအာရုံစိုက်ရအောင်။ ( ကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေသော သူ့အဖွဲ့သားများ၏ ပခုံးကို အနောက်မှလာ၍ နှိပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရင်နှီးအောင်လုပ်လေ့ရှိသော ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်ကို သတိရမိတယ်။ ) သူ့အဖွဲ့သားတွေနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးလာအောင် လုပ်တာကျွန်တော် တို့အားလုံးသိပါတယ်။ သို့သော် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် သူနှင့် လိုက်ဖက်မှုမရှိဟုဆိုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာသည်လည်း အဖွဲ့သားများကို သက်သောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ Bareilly သည် အဖြေကောင်းထွက်လာဖို့ သူ၏ အဖွဲ့သာများ၏ တစ်ယေက်ထဲနေတတ်သူ၊ သူ၏ အလည့်မရောက်ခင် ဘယ်အရာကိုမှ လုပ်လေ့မရှိသူ၊ လက်သည်းကို ဘာမှမကျန်အောင်ကိုက်ပြီး စဉ်းစားတတ်သူများ၏ လုပ်ရပ်များကို မှတ်စုလေ့ရှိသည်။ ဒီအရာသည် အကဲခတ်ရန် အလွန်အရေးပါပြီး အဖွဲ့သားများ၏ သဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်သည် သာမက အဖွဲ့သားများကြားမှာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေ ပါသည်။ စဉ်းစားမိတဲ့အရာတစ်ခုသည် တာဝန်ယူစိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာသောအခါ အဖွဲ့ သားများ နားလည်မှု တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်အဖွဲ့သားများသည် သူတို့လုပ်ဆောင်နေသော စာနာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုမှာ ပိုမိုအာရုံစိုက်နေသည်ကို မသိစိတ်နှင့် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပေါ့မလား။ ၎င်းသည်ထိ တွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သောအလုပ်ဖြစ်သလား။ သူတို့၏ကျင်းပနေရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများသည် ဘီစကွတ်ကိုယူလာခြင်း၊ မဲထည့်ပုံးကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျေနပ်မှုရှိမရှိကို လိုက်နားစွင့်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသော ဆွေမျိုးတွေအကြောင်း မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တော်တော်များများသတိမထားမိကျ ပါဘူး။ သို့သော် အသင်းတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်းကြားမှာ ကွာခြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
Matthew Gosney သည် သြစတြေးလျ တိုက်သားဖြစ်ပြီး လူသားတို့အကျိုးဆောင်ရွက်ပြီး ဖွံဖြိုးမှုကို ကူညီပေးသော အဖွဲ့အစည်းတွင် အရာရှိတစ်ယေက်အနေနှင့် လုပ်ဆောင် နေသော သူ ဖြစ်သည်။
ခေါငျးဆောငျမှုအရညျအခငျြးသညျ နာမညျအသဈတှငျတိုငျး ထှကျလာခွငျးမဟုတျ
ကြှနျတျော အားကစားကို ခဈြမွတျနိုးပါသညျ။ ၎င်းငျးအားကစားသညျ ကြှနျုပျအား တဈဦးတဈယောကျတညျးမဟုတျဘဲ အသငျးအဖှဲ့နှငျ့ အနိုငျရရှိခွငျး၏ပြျောရှငျမှုတှေ သိရှိနားလညျ စခေဲ့ပါသညျ။ ထို့ပွငျ ဆိုးရှားတဲ့နရေ့ကျကို ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ကစားသမားကို ကိုယျခငျြးစာတကျအောငျ နှငျ့ အားကစားသမားမြားမှ အကောငျးဆုံးသော ကစားသမား ပျေါပေါကျလာအောငျ ဘယျလိုဆှဲချေါရမညျကို ကြှနျုပျအားသငျပေးခဲ့ပါသညျ။ Mike Bradley's The Art of Captaincy (Mike Bradley၏ အနုပညာစှမျးဆောငျရညျ) ဆိုတဲ့စာအုပျကို ဖတျခွငျး အားဖွငျ့ သူက ခရဈကတျ ကစားတာကို ဝါသနာပါတယျဆိုတာသိရတယျ။ ခရဈကတျကစားဖို့ဆိုရငျ လူ(၁၁)ယောကျထဲက (၄)ယောကျဟာ အကောငျးဆုံးဖွဈဖို့လိုပွီး ကနျြတဲ့သူတှကေ ကူညီဖို့ ကြှမျးကငျြမှု လုံလောကျစှာရှိရမညျ။ ခေါငျးဆောငျ တဈယောကျရဲ့ဦးဆောငျမှု လုပျဆောငျမှုတှသေညျ အကောငျးလညျး ရှိနိုငျပါသညျ။ သို့သျော အခွား(၃)ယောကျက အတျောဆုံးဖွဈနရေပွီး ကနျြ(၇)ယောကျလညျး ကူညီဖို့ အသငျ့ဖွဈနရေမညျ။ ခေါငျးဆောငျရဲ့လုပျဆောငျခကျြ/ ဦးဆောငျခကျြမကောငျးမှုတှရှေိနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခွား(၄)ယောကျ သညျ အကောငျးဆုံး / အတျောဆုံးဖွဈနရေပွီး ကနျြသူတှကေူညီဖို့လိုအပျသညျ။ လိုရငျးကိုပွောရမညျ ဆိုရငျ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျမှာလညျး ပွဿနာရဲ့အဖွရှေိခငျြမှရှိမယျ။ ဒါမှမဟုတျ ခေါငျးဆောငျသညျ အခနျးထဲမှာ အတျောဆုံးဖွဈကောငျဖွဈနိုငျပါလိမျ့မညျ။ သို့သျောလညျး သူသညျ တခွားတှထေဲက ကြှမျးကငျြတဲ့သူတှကေို ရှေးထုတျနိုငျသငျ့ပါသညျ။ အခွားရောဘာရှိသေးလဲ။
ဥပမာ သငျကတဈနကေုနျအလုပျလုပျခဲ့ပွီး အဖှဲ့သားအားလုံးနှငျ့အိမျစာတှကေိုလုပျနရေတယျ။ ဒါမှမဟုတျ သငျစိတျမစား၊ ဝါသနာမပါတဲ့ အဖှဲအစညျးထဲမှာ အလုပျလုပျနရေတယျဆိုပါစို့။ သငျ့ရဲ့ ပငျကိုစရိုကျတှကေ ဘာဖွဈလိမျ့မယျထငျလဲ။ သူတို့က ဘာရလဒျတှသေူတို့ရလိမျ့မလဲ။ သငျ့ရဲ့အမူအရာ တှကေိုဘယျလို ပွနျတုံ့ပွနျမယျလို့ထငျလဲ။ အခြိနျဘယျလောကျရှိသေးလဲ။ အဖှဲ့သားတှထေဲမှာရော ဘာအရငျးအမွဈတှရှေိသေးလဲ။
ဒါဆိုရငျဘာကွောငျ့ အဖှဲ့သားတှေ အိမျကှငျးကစားခွငျးမှာအသာစီးမှုတှရှေိလဲ။ သူတို့ကှငျးကို ကောငျးကောငျးသိပွီး သူတို့ကို အားပေးတဲ့ပရိတျသတျမြားလဲ သူတို့ဆီမှာ ရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခွားနရောကို သှားကစားရတဲ့အဖှဲ့သားတှရေဲ့ ဖွဈရပျတှကေကျော ခရီးရှညျသှားနရေပွီး ပငျပနျးသျောလညျးသူတပါးတှရေဲ့နရော ကိုယျနဲ့ မရငျးနှီးသောနရောဖွဈသောကွောငျ့သူတို့ အနနေဲ့ရငျးနှီးမှုတှကေိုပါလလေ့ာရသညျ။ အကယျ၍ သငျ့အဖှဲ့သားတှအေိမျမှာ အငျတာနကျလှိုငျးမရှိခွငျး ဒါမှမဟုတျ အလုပျသှားဖို့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ဘတျ(ဈ)ကားပျေါ မှာ မီးပှိုငျ့ကွောငျ့ (၂)နာရီလောကျအကွာ ထိုငျစောငျ့နခေဲ့ရမယျဆိုလြှငျ သငျ့ရဲ့အဖှဲ့ကရနျကုနျမွို့ထဲတှငျ တှဖေို့ရနျ တကယျလိုပါသေးသလာ။ အဖှဲ့သားတှရေနျကုနျမွို့မှာ တှဆေုံ့ဖို့လိုသေး လား။ တကယျလို့သငျကသငျ့အဖှဲ့သားတှကေို ရုံးခနျးထဲမှ မိုဒမျးကရိယာအဟောငျးကို ပေးသုံးခဲ့လြှငျ ဘယျလိုတုံ့ပွနျလိမျ့မယျမလဲ။ တဈစုံတဈဦးက သူတို့ရဲ့ ပငျကိုယျစရိုကျပျေါအခွခေံပွီး သငျ့ရဲ့အမှုအရာကို အဆိုး၊ အကောငျး ဘယျလိုတုံ့ပွနျလာမယျဆိုတာကို တှေးကွညျ့နိုငျပါသညျ။ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျက သူ့ရဲ့ အားကစားသမားတှကေို မှနျကနျတဲ့ အသိပညာတှနေဲ့ အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျပေးနိုငျတယျ။
ဒါကွောငျ့ အကယျ၍ သငျ့ဆီမှာ အဖွမေရှိဘူးဆိုရငျ ဝနျခံလိုကျဖို့ဝနျမလေးပါနဲ့ ။ အဖှဲ့ထဲမှာ စဉျးစားခွငျးအားဖွငျ့ ပွောငျးလဲမှုဖွဈစတေဲ့အရာကို ပိုအာရုံစိုကျရအောငျ။ ( ကှနျပြူတာကိုကွညျ့နသေော သူ့အဖှဲ့သားမြား၏ ပခုံးကို အနောကျမှလာ၍ နှိပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ ရငျနှီးအောငျလုပျလရှေိ့သော ခေါငျး ဆောငျတဈယောကျကို သတိရမိတယျ။ ) သူ့အဖှဲ့သားတှနှေငျ့ ပိုမိုရငျးနှီးလာအောငျ လုပျတာကြှနျတျော တို့အားလုံးသိပါတယျ။ သို့သျော ဤလုပျဆောငျခကျြသညျ သူနှငျ့ လိုကျဖကျမှုမရှိဟုဆိုနိုငျသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ထိုအရာသညျလညျး အဖှဲ့သားမြားကို သကျသောငျ့သကျသာရှိသောကွောငျ့ဖွဈ သညျ။ Bareilly သညျ အဖွကေောငျးထှကျလာဖို့ သူ၏ အဖှဲ့သာမြား၏ တဈယကျေထဲနတေတျသူ၊ သူ၏ အလညျ့မရောကျခငျ ဘယျအရာကိုမှ လုပျလမေ့ရှိသူ၊ လကျသညျးကို ဘာမှမကနျြအောငျကိုကျပွီး စဉျးစားတတျသူမြား၏ လုပျရပျမြားကို မှတျစုလရှေိ့သညျ။ ဒီအရာသညျ အကဲခတျရနျ အလှနျအရေးပါပွီး အဖှဲ့သားမြား၏ သဘာဝနညျးလမျးဖွဈသညျ သာမက အဖှဲ့သားမြားကွားမှာ သကျသောငျ့သကျသာရှိစေ ပါသညျ။ စဉျးစားမိတဲ့အရာတဈခုသညျ တာဝနျယူစိတျတှေ တဖွညျးဖွညျးလြော့နညျးလာသောအခါ အဖှဲ့ သားမြား နားလညျမှု တဈခုဘယျလိုလုပျနိုငျမယျဆိုတာဖွဈပါသညျ။ သငျသို့မဟုတျသငျ့အဖှဲ့သားမြားသညျ သူတို့လုပျဆောငျနသေော စာနာမှုနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြကောငျးတဈခုကို ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျမှုမှာ ပိုမိုအာရုံစိုကျနသေညျကို မသိစိတျနှငျ့ နားလညျသဘောပေါကျခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျပေါ့မလား။ ၎င်းငျးသညျထိ တှကေို့ငျတှယျနိုငျသောအလုပျဖွဈသလား။ သူတို့၏ကငျြးပနရောတှငျ မရှိမဖွဈလိုအပျသောအရာမြားသညျ ဘီစကှတျကိုယူလာခွငျး၊ မဲထညျ့ပုံးကို ပွငျဆငျခွငျး၊ ကနြေပျမှုရှိမရှိကို လိုကျနားစှငျ့ခွငျးနှငျ့ ကနျြးမာရေး မကောငျးသော ဆှမြေိုးတှအေကွောငျး မေးမွနျးခွငျးဖွဈပါသညျ။ တျောတျောမြားမြားသတိမထားမိကြ ပါဘူး။ သို့သျော အသငျးတဈခုရဲ့အောငျမွငျခွငျး၊ ရှုံးနိမျ့ခွငျးကွားမှာ ကှာခွားမှုတှရှေိနိုငျပါတယျ။
Matthew Gosney သညျ သွစတွေးလြ တိုကျသားဖွဈပွီး လူသားတို့အကြိုးဆောငျရှကျပွီး ဖှံဖွိုးမှုကို ကူညီပေးသော အဖှဲ့အစညျးတှငျ အရာရှိတဈယကျေအနနှေငျ့လုပျဆောငျနသေောသူဖွဈသညျ။
I love sport. It taught me the joy of winning asateam, empathy for the player who has hadabad day and how to get the best out of people. I was reading Mike Brearley’s The Art of Captaincy,acricket book and here is what I learnt. Of course, he hasabrilliant cricket mind, but cricket isateam sport that requires at least four of the eleven members having ‘their best day’ and the rest being competent enough to assist them. A captain can haveagood performance, but three others need to be just as good and the other seven need to help. A captain can haveabad performance, but four others might be on their ‘best day’ and the other seven needs to help. In other words,aleader may or may not have the answer to the problem or be the smartest person in the room, but what he/she should have is the skills to bring the best out in others. What else?
Let’s say you are working onagroup assignment at university after working all day or you are working withadisinterested work team. What personalities do you have? What issues might they be facing? How might they react toagesture from you? How much time do you have? What resources do you and your team have?
Ok, why do teams who play at home have an advantage? They have the support of their home fans and they know the ground. But what about the fact that the away team has to travelalong way and be fatigued when they arrive or they might also be warming up with foreign resources or even experience problems locating the toilet in the facilities. If your team has had to sit for two hours onabus in Yangon traffic to get to work or they may not have internet at home. Does your team have to meet in downtown Yangon? How would your team member react if you offered them an old modem from the office? You can imagine how someone might react positively or negatively to your gestures based on their personality. The right leader can make the right move with the knowledge of their players.
So if you know you will not have the answer (and humble enough to admit it), why not focus on the group dynamics (within reason – I rememberateam leader who would go around and massage the neck of team members as he crept up behind them looking at their computer screens, yuck!) We knew he was tryinganew tactic but it did not suit his style and the type of relationship he had developed with his people. It was not natural and made people uncomfortable. Brearley noted some of his team members who would need to be alone or completely switch off before their turn and others would chew their nails until they had none left. These were important observations to make and it made his tactics natural and appropriate.
A curious side thought here, is how one acknowledges the group dynamic developments in university assignments where responsibility is broken up evenly. Would there ever be an unconscious realization from the team that you or your team member is focusing more on fosteringagood environment through the ‘humanizing’ they are doing. Is it tangible work? Essentially their work has been managing venues, bringing cookies, setting up the Dropbox, being the ear for inter-group grievances and asking about that sick relative. Most of the time it is not noticed, but it can be the difference betweenateam win or loss.
Matthew Gosney is an Australian Human Resources Professional working in the Humanitarian and Development Aid industries.
For inquiries about partnering, sponsoring, or joining the Wynee movement, contact our mail